တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလား(၃)ခု ရယူခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးနည်းပြများ
15 Oct 2018 . 7:12 PM
နည်းပြတစ်ဦးအတွက် တစ်ရာသီအတွင်း ဆုဖလား(၃)ခုရယူဖို့ဆိုတာက အရမ်းခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ ဒီလိုမှတ်တမ်းကောင်း ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြဆိုတာလည်း ဘောလုံးသမိုင်းမှာ လက်ချိုးရေလို့တောင် ရတဲ့အနေအထားပါ။ ဒါကြောင့် ဒီလိုရှားရှားပါးပါး အောင်မြင်မှုရယူခဲ့ကြတဲ့ နာမည်ကျော် နည်းပြတွေကို Akhayar Sports ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် . .
၅. ဖာဂူဆန် Alex Ferguson (မန်ယူ)
တစ်ရာသီအတွင်း ဖလား(၃)လုံး ရယူခဲ့တဲ့ ရှားရှားပါးပါးနည်းပြတွေထဲမှာ မန်ယူဂန္ထ၀င်နည်းပြကြီး ဖာဂူဆန်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ပါပဲ။ မန်ယူအသင်းကို (၂၆)နှစ်ကြာ ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို စံချိန်တင်အဖြစ် (၁၃)ကြိမ်ရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သလို၊ ချန်ပီယံလိဂ်အပါအ၀င် ဆုဖလား(၃၈)ခုအထိ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဖာဂူဆန်ရဲ့ နည်းပြဘ၀မှာ အောင်မြင်မှုအများဆုံးက ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်၊ FA ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားဆွတ်ခူးခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တွေထဲမှာ ပထမဆုံးဖလား(၃)လုံး ရရှိခဲ့တဲ့အသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်စေခဲ့ပါတယ်။
၄.မော်ရင်ဟို Jose Mourinho (အင်တာမီလန်)
အင်တာမီလန်အသင်းမှာ မော်ရင်ဟိုရဲ့ အောင်မြင်မှုက ခမ်းနားလွန်းခဲ့တယ်။ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီမှာ စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာ၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတွေ ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖလား(၃)လုံးရဖူးတဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ မော်ရင်ဟိုရဲ့ နည်းပြဘ၀မှာ တစ်ရာသီအတွင်း ဖလား(၃)လုံးရတာက ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီဟာ ပထမဆုံးမဟုတ်ပါဘူး။ ပေါ်တိုနည်းပြဘ၀ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီက အမှတ်ပေးဖလား၊ ပေါ်တူဂီဖလား၊ UEFA ဖလားတို့ကို ရရှိခဲ့ပေမယ့် UEFA ဖလားက ချန်ပီယံလိဂ်လို အဆင့်မဟုတ်လို့ ဖလား(၃)လုံးအဖြစ် မသတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါဘူး။
၃.လူးဝစ်အင်းနရစ် Luis Enrique (ဘာစီလိုနာ)
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်နည်းပြတွေထဲမှာ လူးဝစ်အင်းနရစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းရမယ်။ ဘာစီလိုနာကို ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ (၃)နှစ်တာကာလအတွင်း ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့ပြီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာ ဖလား(၃)လုံး ရယူခဲ့တယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် တစ်ရာသီအတွင်း ဖလား(၃)လုံးရယူခဲ့တဲ့ နည်းပြဆိုလို့ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola နဲ့ လူးဝစ်အင်းနရစ်တို့ နှစ်ဦးပဲရှိပါတယ်။
၂.ဂွါဒီယိုလာ Pep Guardiola (ဘာစီလိုနာ)
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ သမိုင်းတစ်လျှောက် အောင်မြင်မှုအများဆုံး နည်းပြလို့ ပြောရမှာပါ။ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီတုန်းက ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတူ ဖလား(၃)လုံးရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၉ တစ်နှစ်တည်းမှာ ဖလား(၆)လုံးအထိ ရယူခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ဘယ်နည်းပြမှ မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့ဘူး။
၁. ဟေးနက်စ် Jupp Heynckes (ဘိုင်ယန်မြူးနစ်)
Jupp-Heynckesဟေးနက်စ်ဟာ နည်းပြလောကမှာ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ရာသီထဲ ဖလား(၃)လုံးကို ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီမှ ရယူနိုင်ခဲ့တယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းနဲ့အတူ ဘွန်ဒစ်လီဂါ၊ ဂျာမန်ဖလား၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားတို့ကို ဆွတ်ခူးခဲ့ပြီး ဒါဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဖလား(၃)လုံးရခဲ့တာပါ။
မော်ဒန်ဘောလုံးလောကမှာ နည်းပြတစ်ဦးအတွက် စောင့်ကြိုနေတဲ့ ဖိအားတွေက အများကြီးပါပဲ။ အခုရေတွင်းတူး၊ အခုရေကြည်သောက်ချင်တဲ့ အသင်းပိုင်ရှင်တွေကြောင့် အသင်းတစ်သင်းကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုင်တွယ်တဲ့ နည်းပြဆိုတာ ရှားပါးလာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းပြတွေမျိုး အောင်မြင်မှုရယူနိုင်မယ့် နည်းပြတွေ ထပ်ပေါ်ထွက်လာဦးမလားဆိုတာ . .
တဈရာသီအတှငျး ဆုဖလား(၃)ခု ရယူခဲ့တဲ့ နာမညျကွီးနညျးပွမြား
နညျးပွတဈဦးအတှကျ တဈရာသီအတှငျး ဆုဖလား(၃)ခုရယူဖို့ဆိုတာက အရမျးခကျခဲလှနျးပါတယျ။ ဒီလိုမှတျတမျးကောငျး ရယူနိုငျခဲ့တဲ့ နညျးပွဆိုတာလညျး ဘောလုံးသမိုငျးမှာ လကျခြိုးရလေို့တောငျ ရတဲ့အနအေထားပါ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုရှားရှားပါးပါး အောငျမွငျမှုရယူခဲ့ကွတဲ့ နာမညျကြျော နညျးပွတှကေို Akhayar Sports ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ . .
၅. ဖာဂူဆနျ Alex Ferguson (မနျယူ)
တဈရာသီအတှငျး ဖလား(၃)လုံး ရယူခဲ့တဲ့ ရှားရှားပါးပါးနညျးပွတှထေဲမှာ မနျယူဂန်ထဝငျနညျးပွကွီး ဖာဂူဆနျလညျး တဈဦးအပါအဝငျပါပဲ။ မနျယူအသငျးကို (၂၆)နှဈကွာ ကိုငျတှယျခဲ့ပွီး ပရီးမီးယားလိဂျဖလားကို စံခြိနျတငျအဖွဈ (၁၃)ကွိမျရအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့သလို၊ ခနျြပီယံလိဂျအပါအဝငျ ဆုဖလား(၃၈)ခုအထိ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ဖာဂူဆနျရဲ့ နညျးပွဘဝမှာ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံးက ၁၉၉၈-၉၉ ရာသီလို့ ဆိုရမှာဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျ၊ FA ဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျဖလားဆှတျခူးခဲ့သလို ပရီးမီးယားလိဂျကလပျတှထေဲမှာ ပထမဆုံးဖလား(၃)လုံး ရရှိခဲ့တဲ့အသငျးအဖွဈ မှတျတမျးဝငျစခေဲ့ပါတယျ။
၄.မျောရငျဟို Jose Mourinho (အငျတာမီလနျ)
အငျတာမီလနျအသငျးမှာ မျောရငျဟိုရဲ့ အောငျမွငျမှုက ခမျးနားလှနျးခဲ့တယျ။ ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီမှာ စီးရီးအေ၊ ကိုပါအီတာလီယာ၊ ခနျြပီယံလိဂျဖလားတှေ ဆှတျခူးခဲ့ပွီး အသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ဖလား(၃)လုံးရဖူးတဲ့ အရသာကို မွညျးစမျးခှငျ့ရအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့တယျ။ မျောရငျဟိုရဲ့ နညျးပွဘဝမှာ တဈရာသီအတှငျး ဖလား(၃)လုံးရတာက ၂၀၀၉-၁၀ ရာသီဟာ ပထမဆုံးမဟုတျပါဘူး။ ပျေါတိုနညျးပွဘ၀ ၂၀၀၂-၀၃ ရာသီက အမှတျပေးဖလား၊ ပျေါတူဂီဖလား၊ UEFA ဖလားတို့ကို ရရှိခဲ့ပမေယျ့ UEFA ဖလားက ခနျြပီယံလိဂျလို အဆငျ့မဟုတျလို့ ဖလား(၃)လုံးအဖွဈ မသတျမှတျခံခဲ့ရပါဘူး။
၃.လူးဝဈအငျးနရဈ Luis Enrique (ဘာစီလိုနာ)
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျနညျးပွတှထေဲမှာ လူးဝဈအငျးနရဈကိုလညျး ထညျ့သှငျးရမယျ။ ဘာစီလိုနာကို ကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ (၃)နှဈတာကာလအတှငျး ဆုဖလား(၉)ခုအထိ ရယူခဲ့ပွီး ၂၀၁၄-၁၅ ရာသီမှာ ဖလား(၃)လုံး ရယူခဲ့တယျ။ ဘာစီလိုနာအသငျး သမိုငျးတဈလြှောကျ တဈရာသီအတှငျး ဖလား(၃)လုံးရယူခဲ့တဲ့ နညျးပွဆိုလို့ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola နဲ့ လူးဝဈအငျးနရဈတို့ နှဈဦးပဲရှိပါတယျ။
၂.ဂှါဒီယိုလာ Pep Guardiola (ဘာစီလိုနာ)
ဘာစီလိုနာအသငျးရဲ့ သမိုငျးတဈလြှောကျ အောငျမွငျမှုအမြားဆုံး နညျးပွလို့ ပွောရမှာပါ။ ၂၀၀၈-၀၉ ရာသီတုနျးက ဘာစီလိုနာအသငျးနဲ့အတူ ဖလား(၃)လုံးရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၀၉ တဈနှဈတညျးမှာ ဖလား(၆)လုံးအထိ ရယူခဲ့တဲ့စှမျးဆောငျရညျမြိုး ဘယျနညျးပွမှ မလုပျပွနိုငျခဲ့ဘူး။
၁. ဟေးနကျဈ Jupp Heynckes (ဘိုငျယနျမွူးနဈ)
Jupp-Heynckesဟေးနကျဈဟာ နညျးပွလောကမှာ အောငျမွငျမှုရခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ တဈရာသီထဲ ဖလား(၃)လုံးကို ၂၀၁၂-၁၃ ရာသီမှ ရယူနိုငျခဲ့တယျ။ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးနဲ့အတူ ဘှနျဒဈလီဂါ၊ ဂြာမနျဖလား၊ ခနျြပီယံလိဂျဖလားတို့ကို ဆှတျခူးခဲ့ပွီး ဒါဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပထမဆုံးအကွိမျ ဖလား(၃)လုံးရခဲ့တာပါ။
မျောဒနျဘောလုံးလောကမှာ နညျးပွတဈဦးအတှကျ စောငျ့ကွိုနတေဲ့ ဖိအားတှကေ အမြားကွီးပါပဲ။ အခုရတှေငျးတူး၊ အခုရကွေညျသောကျခငျြတဲ့ အသငျးပိုငျရှငျတှကွေောငျ့ အသငျးတဈသငျးကို နှဈပေါငျးမြားစှာ ကိုငျတှယျတဲ့ နညျးပွဆိုတာ ရှားပါးလာခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ အခုဖျောပွခဲ့တဲ့နညျးပွတှမြေိုး အောငျမွငျမှုရယူနိုငျမယျ့ နညျးပွတှေ ထပျပျေါထှကျလာဦးမလားဆိုတာ . .